Wepamusoro gumi Vakadzi Vanowirirana Kwemakore Gumi - Wwe
Wepamusoro gumi Vakadzi Vanowirirana Kwemakore Gumi
Ave makore gumi zvakadii!
Mumakore gumi apfuura, takaona shanduko yesismic mumaonero atinoita isu uye kugaya mutsimba. Nekuda kweizvozvo, isu takaona kuwedzera kweyekugona kweyemitambo yedzakawanda dzenyeredzi dzinofadza denderedzwa rakatenderera munguva yemazuva ano.
Iyi shanduko yanga ichinyatso kujeka kune vechikadzi varwi vemazuva ano, vari parizvino kupfuura panguva yegoridhe. Ndihwo hunhu hwemapoka evakadzi mukurwira kwepasirese zvekuti basa rekutora gumi rakanakisa regumi rave rakaoma.
Kushaikwa kwezivo pachikamu chemunyori cheJoshi mutsimba maitiro kwaireva kuti pakanga pasina nzvimbo yemakuru akafanana naMeiko Satomura. Kunyangwe vanga vatora basa rakakura pasi rese mukutsanangura kurwira kwevakadzi, maScots Piper 'Viper' Niven naKay Lee Ray vanowirawo, sezvinoita mapiyona eWWE Paige, Alexa Bliss naNataliya.
Kunyangwe nemazita epamusoro aya asipo, isu tanga takaunganidza rinoshamisa runyorwa. Nezvo izvo zvataurwa, heano epamusoro gumi echikadzi evakadzi vegumi gumi apfuura.
Starter yekushamisika pane iyo rondedzero asi haugone kupokana kuti Nikki akasvika makore gumi zvakadii.
Pakazobviswa 2010, Nikki nemunin'ina wake Brie hapana chavaingowedzera kunze kwechikamu chevakadzi. Yakanga isiri iyo kusvika iye paakave nyeredzi pane chaicho TV show Yega Divas iyo WWE yakatanga kumuisa iye seyakakurumbira nyeredzi.
Iyo kambani yakatora mukana wekufarirwa kwechiratidziro nekuisa iyo WWE Divas Championship paBella muna2014. Aizoenderera mberi nekubata zita iri rekodhi 301 mazuva. Munguva iyoyo, iye aigona kutora nhanho dzakakura maererano neake-mhete mutambo, achipfeka zvinowirirana mechi-kumusoro.
Uku ndiko kwaive kuvandudzwa kwake kuti aizove ruoko rwakatsiga muchikamu sezvo chakatanga kukura muna2016.
Mutambo wake wekupedzisira mu-mhete wakauya mu2018 paakakanda Evolution PPV padivi naRonda Rousey, chimwe chinhu chakaratidza kukura kwakaita nyeredzi yaakange ave munyika yese yemitambo.
uyo akatamba bella munguva yorubvunzavaeni
maitiro ekurarama muwanano isina mufaro
kutaura sei kana iwe wagadzirira hukama
handina shungu nechinhu chero chipi zvacho
maitiro ekuudza kana murume waunoshanda naye achifarira